Soosaarayaasha iyo Alaabada Si Weyn Looga Dhigay - Shiinaha Warshad Ka Badatay
Qalabaynta Qalabka Isku-dhafan ee Qalabka Laba-cirbadood
Isku-xoqiddu waa geedi socod laba-tallaabo ah oo qaybo shaqsi ahaan loo mideeyay la isku daro si kor loogu qaado shaqeynta sheyga. Guud ahaan, qaybo balaastig ah ayaa lagu soo saaraa iyadoo la adeegsanayo wax lagu duro caag balaastig ah. Qaboojinta ka dib, waxaa lagu dhejiyaa qalab aad u ballaadhan ka dibna lagu dahaadhaa termoplastic dhalaalay ama caag.
Waa Maxay Isku-Wareejinta?
Xadgudubka xad-dhaafka ahi waa geedi-socod wax-ku-qaadis cirbad gaar ah oo abuuraya qayb keliya iyada oo la adeegsanayo isku-darka laba ama in ka badan oo caag ah ama qalabka elastomer ah. Inta lagu jiro howsha balaastigga balaastigga ah, qeybta lakabka salka ayaa la moodaa marka hore, ka dibna lakabyada balaastigga ah ee dheeri ah ayaa lagu mideynayaa hareeraha iyo hareeraha qaybta asalka ah.
Xadgudub VS. Geli Mashiinka, Keebaa U Fiican Mashruucaaga?
Halkan waxaa ku yaal tilmaamo si loo go'aamiyo habka wax soo saar ee ugu habboon mashruucaaga:
Xulo iskudhafka xad dhaafka ah markii: Xullo isbadal gelinta markaad:
1. Qaybaha waxaa laga sameyn karaa thermoplastics, iyo / ama caag 1. Isticmaal substrate horay loo sii diyaariyay.
2. Naqshadeynta waxay ka kooban tahay lakabyo badan, qalab (ku kooban kuwa kor ku xusan), iyo / ama midabbo. 2. Substrate-kaagu wuxuu ka samaysan yahay bir, fiilooyin, ama qaybo kombuyuutar ku shaqeeya.
3. Wuxuu soo saari doonaa lakabka hoose iyo kan hoose 3. Waxaad rabtaa qaybta dhamaysatay inay ahaato hal xabbad oo adag.
4. Qeyb uma baahna in lakala jaro ama lakala jaro.
Waa maxay Faa'iidooyinka iyo Xaddidaadaha isku dhafka?
Xad-dhaafku wuxuu bixiyaa faa'iidooyin badan, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay xaddidaado yar oo aad u baahan tahay inaad ka feejignaato.
Faa'iidooyinka isku dhafka
• Hoos udhaca howlaha labaad, isku imaatinka iyo qarashka shaqada
• Qabashada iyo ergonomiska oo la hagaajiyay
• Abuurista shaabad aan biyuhu xirin
• Bixinta dahaarka korantada
• Nuxurka gariirka ama nuugista codka
• Qurxinta midabada leh
• Astaamaha farsamaysan ee rogrogmi kara ku habboon iyo / ama shaqada
• Si la mid ah wax isku shaandheynta cirbadeynta, iskudhafka xad dhaafka ahi wuxuu leeyahay kharash horudhac ah oo xad dhaaf ah
• Waqti ayey ku qaadataa oo waa qaali in soosaarka iyo wax ka beddelka qalabka birta ka baxsan, iyo mashiinnada wax lagu duro ee laba-irbadood ah ayaa adag in la garaaco.
• Loo baahan yahay in la soo saaro tiro badan oo qaybo ah si loo qaybiyo kharashyadan.
Fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto wixii su'aalo ah, si aad u bilawdo mashruucaaga soo socda ee maanta, si fudud ugu soo dejiso qaabka 3D CAD at yuanfang.com.
Warshadda caaryada, Wax taaj oo kale duritaanka Iyadoo bir biraha, Wax taaj oo kale galinta caaga ah, Samaynta Qaab Muunad, Soosaarayaasha caaryada, Caaryada Custom,